"Volkswagen" - okunethezeka evenini
"Volkswagen" - a evenini, okuyinto ingenye ethandwa kakhulu phakathi imindeni emikhulu nenithanda imoto esisebenzayo. Ziningi amamodeli ukukhiqiza lolu ukukhathazeka kuleli kilasi Nokho, ukukhuluma mayelana ethandwa kakhulu.
Into yokuqala Ngithanda ukunitshela "Volkswagen". Lokhu evenini yakhelwe izihlalo eziyisikhombisa futhi ithatha omunye isikhundla okuholela kule simo onobuhle German kuleli kilasi. Ngo-2010, wanyathelisa inguqulo ethandwa kakhulu, okuyilezi - restyling ukuguqulwa T5.
Kukhona ingaphakathi enkulu ehlotshiswe. Njengoba ngokuvamile lokhu umshini wathenga ngezinhloso zebhizinisi, yonke imizamo ukuthuthukiswa ziye sibhekiswe ekuthuthukiseni Ergonomics futhi ulethe Gap ekupheleleni. Kwathi. Lezi zihlalo ezenziwe kuhle, iphaneli sensimbi senziwe ephezulu material izinga, amasondo ayo kahle esandleni sakho, futhi iminyango ngokuhambisa enza kube lula ukuze kulingane. Futhi sigcwalisa umbono inhlangano lengenamaphutsa soundproofing ezinhle nendawo ukhululekile egcwele.
Enye "Volkswagen" ethandwa. Evenini ukuthi inikeziwe umphakathi ngo-2003 futhi kwaba ngo-August. Wakhe eqoqwe emsamo imoto ngokuthi "yohlobo lweVolkswagen Golf" (isizukulwane lesi-5). Le modeli isebenzisa oluvala amasondo amasha okukhulisa ifakwe-isixhumanisi ezine ukumiswa kanye electromechanical amandla ayo.
Kusukela 2003, unyaka ngoNovemba (ngemva kwezinyanga ezimbalwa emva kokukhululwa), imoto waqala ukuhlomisa wobuhlakani "smart" simiso izikhumbuzo umshayeli phambi umgibeli ukuthi babekhohliwe ukuphatha ukubophela esihlalweni sakho amabhande. nabathengisi Mayelana zokuvikeleka wacabanga kwasekuqaleni. Uma Qha, makungabi njalo, ingozi kwenzeka, umshini cishe akazange ahlupheke, ngaphandle uma kwenzeka ukungqubuzana engaphelele. Ngo ukuhlola esisebenzayo, kwatholakala ukuthi nje umzimba kancane imoto jeza engozini enjalo.
Ngokuvamile, kumelwe kushiwo ukuthi Touran - lena umshini yesibili, okuyinto lwenzelwe futhi wabutha e-Europe, wathola ukukala ezintathu-star ngokuphepha kwabahamba ngezinyawo. Ukuze umgibeli induduzo, "Volkswagen" -miniven wathola izinkanyezi ezinhlanu. Imoto has konke: anti-lock braking system ABS, ESP Stability Programme uhlelo, izibani oluhambelana ngokuzenzakalelayo ukushintsha isikhundla kuncike engela eziqondisa nesivinini komgwaqo. Futhi-ke, imodeli ifakwe zonke airbag kudingekile - phambi kanye namafasitela, futhi ohlangothini.
Futhi ekugcineni, amagama ambalwa mayelana nale moto. It has "Volkswagen" -miniven 7 izihlalo, kanye bonke abanye, labo okuxoxwe ngawo ngenhla. Ikhishwa ke kusukela ngo-1995, umnyaka woyekelo ngoba ngaso sonke isikhathi-ke usebhekene ezinye restyling. Kuyathakazelisa ukuthi igama e Persian kusho 'abathwala amakhosi. " Lokhu ngenhlanhla kuwumsebenzi ahlangene ukukhathazeka "Volkswagen" futhi "Ford Galaxy". Iplani kwakungukuthi ukuthatha isikhundla okuholela ingxenye evenini, futhi siye saba. Lokhu "Volkswagen" -miniven wathola Izibuyekezo omuhle kakhulu. Ngenxa naphezu kokuba yilungu ekilasini ethobekile kakhulu, imoto wayenamandla ngempela. EMexico, isibonelo, evenini yayitholakala ne-150 eqinile 1.8-litre turbocharged injini, okuyinto benza umsebenzi wabo ngaphansi kokulawula a gearbox 5-ngesivinini. E-Argentina, le mishini ayenendawo motors buthaka ezikhiqiza 115 hp Kodwa inguqulo enamandla kakhulu - ke Sharan MK2. Wathola umyalezo sha amandla amayunithi bakwazi ukuthuthukisa amandla esiphezulu "amahhashi" 200! Enye into engikhathazayo wenza onobuhle diesel. Yiqiniso, bona zaba ntekenteke - amandla ahluka 140 kuya 170 hp
Ngokuvamile, bonke amancane ekhishwa 'Volkswagen "- umshini ukhululekile, inamandla futhi, okubaluleke, ukuphepha. Shono sebewelele ethandwa kangaka emhlabeni wonke.
Kuyini kwesibungu self-ezenziwe?
Ukuhlola Uhlelo umkhonyovu. Yiziphi scanner kanye adapters ukuze kuhlonzwe izimoto zasekhaya
Amakhekhe amnandi ukukhanya. zokupheka
Windows x64 noma x86 - isethi?
Piston compressor: ezihlukahlukene, umklamo, izimiso yokusebenza kudivayisi Ukukhetha
Ukulungisa indawo kwesikrini laptop
Kanjani ukubala zamapulangwe? Siding: usayizi, ukufakwa, izesekeli